Inuu ku dhowaaday ku biirista Barcelona, xilligii ay Chelsea dooneysay saxiixiisa, koox kale oo uu sida cad isaga diiday & xagaagii ugu adkaa mustaqbalka Wayne Rooney – Gool FM
(England) 24 Nof 2020. Wayne Rooney ayaa soo faagay xusuus hore oo ku aaddan waayihiisii Manchester United iyo markii uu warqadda codsiga ee in la fasaxo ah uu gudbiyay maamulka sare ee kooxdiisii hore.
Rooney ayaa xagaagii 2010 ku fikiray inuu ka hayaamo Old Trafford isagoo ka dalbaday maamulka Red Devils inay fasaxaan, waxaana ay taasi soo jeedisay dareenka kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub.
Weeraryahankii hore ee xulka qaranka England ayaa sidoo kale qirtay inuu ugu yaraan laba maalmood ku mashquulsanaa sida uu ugu soo baxayo shaxda koowaad ee kooxda Barcelona oo uu xilligaas hor kacayay Tababare Pep Guardiola.
“Waxaa laba maalmood maankeyga ku haayay inaan diyaar u ahay u dhaqaaqista Spain iyo inaan halkaas ka soo ciyaaro” ayuu Rooney u sheegay United podcast.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u dhaqaaqo Barcelona, balse waxaa la ii badinayay dhanka Real Madrid in ka badan dhanka Barca, Chelsea ayaa sidoo kale tartanka ku jirtay” ayuu yiri gool dhaliyaha ugu sarreeya taariikhda Manchester United.
“Waxaan xasuustaa inaan hal maalin aan fadhiyay oo aan ka fikirayay ‘qiyaas anigoo la ciyaaraya Barcelona-daas – Messi, Xavi, Iniesta iyo Bosquets’, xilligaasna Messi garabka ayuu ka ciyaari jiray.
“Waxaan ku fikirayay inaan si buuxdo ugu soo bixi karo ka ciyaarista weerarka dhexe ee kooxdaas” ayuu milicsaday Rooney.
Kabtankii hore ee xulka qaranka England ayaa sidoo kale qiray inay jireen kooxo uu kula xifaaltamo Premier League oo saxiixiisa hoggaanka u hayay sida Chelsea iyo Manchester City.
Balse Rooney ayaa carrabka ku adkeeyay inuusan ku biiri lahayn Man City, balse ay suurogal ahayd u dhaqaaqista Real Madrid, Barcelona iyo Chelsea.
Ugu dambeyn Rooney ayaa xagaagaas ka baaqsaday inuu ka hayaamo Manchester United, waxaana uu nagi kusii ahaaday Old Trafford illaa iyo xagaagii 2017, markaas uu ku biiray kooxdiisa caruurnimada ee Everton.
Wayne Rooney hadda waxa uu u ciyaaraa Derby County, sidoo kalena waa tababaraha ku meel-gaarka ah ee kooxdaas.